Ladle - တရုတ်ရှန်ဒေါင်း Huaxin လျှပ်စစ်အရည်ကျိုမီးဖို
အစိတ်အပိုင်းများ furnaceSpare induction
induction အပူအရည်ကျိုမီးဖို (Forge
ဆန့်ကျင်ဘက် vibrator တန်းစီ pneumatic
ပင်မထိန်းချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ (panel က)
ရေ cable ကိုအအေး
ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း client ကိုရဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီး ladles ထုတ်လုပ်, 90ton ရန်အလွန် 0.3ton ထံမှ ladle စွမ်းရည်ရိုင်းအကွာအဝေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နေကြသည်။ 1.Product ဖျေါပွခကျြအားလုံး foundry ladles စွမ်းအင်သုံးလည်ပတ်များအတွက်မော်တာဂီယာစည်းဝေးပွဲကိုတပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါလည်ပတ်အမြန်နှုန်းဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ foundry သတ္တုများပုံသွန်းစစ်ဆင်ရေးများအတွက် foundry ladle ဟော့သတ္တု ladle Casting ၏လျှောက်လွှာ, မီးဖိုများ၏ရှေ့မှောက်၌သံအရည်လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပြီးနောက်, dri အားဖြင့်သွန်းလောင်းရန်သတ္တုများပုံသွန်းမော်ဒယ်အရပ်မှပို့ ...
ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း client ကိုရဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီး ladles ထုတ်လုပ်, 90ton ရန်အလွန် 0.3ton ထံမှ ladle စွမ်းရည်ရိုင်းအကွာအဝေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နေကြသည်။
အားလုံး foundry ladles စွမ်းအင်သုံးလည်ပတ်များအတွက်မော်တာဂီယာစည်းဝေးပွဲကိုတပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါလည်ပတ်အမြန်နှုန်းဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
foundry ladle Casting ၏လျှောက်လွှာ
foundry သတ္တုများပုံသွန်းစစ်ဆင်ရေးများအတွက်ရေပူသတ္တု ladle, မီးဖိုများ၏ရှေ့မှောက်၌သံအရည်လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပြီးနောက်ကားတစ်စီးမောင်းနှင်အားဖြင့်သွန်းလောင်းရန်သတ္တုများပုံသွန်းမော်ဒယ်အရပ်မှပို့။
ခံဝန်မတိုင်မီစစ်ဆင်ရေး ချ. သံမဏိပွုလုပျစက်ရုံ, အပွင့်လင်းထင်းမီးဖိုအတွက် foundry, မီးဖိုသို့မဟုတ် converter ကိုသွန်းသောသံမဏိများအတွက် Ladle ။
သွန်းသောသံ ladles တာဘိုင် Two-လမ်းဂီယာ rotary နှင့်ဖြောင့်ဂီယာဂီယာ Self-သော့ခတ်အမျိုးအစားနှစ်မျိုး (1:72, 1 အချိုး: 75) သို့ခွဲခြားထားတယ်သည့်အဓိကအင်္ဂါရပ်များနေသောခေါင်းစဉ်: rotary စင်တာဒီဇိုင်းနှစ်ခု-လမ်း Reversible လုပ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်ပါသည် ကောင်းစွာ, reset.Turbine Two-လမ်းဂီယာအမျိုးအစား rotary အခြေခံ Two-လမ်းတာဘိုင်ဒုဂီယာချောမွေ့ဂီယာ, အဆင်ပြေစစ်ဆင်ရေးချမှတ်, သော့ခတ်ဂီယာဂီယာရိုးတံကနေ Two-လမ်းကောင်းသော consistency.Straight မြင့်မားတဲ့အမျိုးအစား, ထိန်းချုပ်မှုပွတ်တိုက်၏နှစ်ဆအဆင့်ဆင့်ချမှတ်, Self-သော့ခတ်စွမ်းဆောင်ရည်, လွတ်လပ်စွာပေါ့ပါး, အနည်းငယ်ပြင်ပအင်အားစုအားဖြင့်ခိုင်ခံ့သောတံချနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အမြန်ပြန်လာ, လုံခြုံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော၏အသုံးပြုမှုကို kowtow ပါဘူး။
2. သံ ladle ချ. ၏ Feature ကို
1) .Reasonable ဟာလည်ပတ်စင်တာကိုရှေးခယျြ, အဆင်ပြေစစ်ဆင်ရေးလောင်းလက်စသတ်သောအခါအခြေခံယင်းကိစ္စများနိုင်ပါတယ်။
2) .Adopt နှစ်ဆတီကောင်ဘီးတစ်စုံ transmission.Although ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဝယ်လိုအားမြင့်မားတဲ့, ဒါပေမဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဂီယာနှစ်ခု-လမ်း Reversible လုပ်။
3) .Enclosure န်ဆောင်မှုဘဝတိုးချဲ့ထားတဲ့သုံးဆအာမခံ, welding ထူသံမဏိပန်းကန်, taper များ၏ပေါင်းစပ်ချမှတ်ခြင်းအားဖြင့်အိတ်ဖွဲ့စည်းပုံ၏အောက်ဆုံး, အောက်ခြေအနားကွပ်, ထား, နှင့်အော်ပရေတာများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုသေချာသည်။
3. နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကို
က DIA (မီလီမီတာ)
* 705 * 1420 1100
* 780 * 1445 1160
* 860 * 1470 1220
* 990 * 1670 1340
* 1060 * 1725 1425
* 1175 * 1910 1510
* 1270 * 2015 1590
* 1340 * 2205 1770
* 1440 * 2350 1855
* 1548 * 2400 2020
* 1610 * 2900 2150
* 1690 * 2950 2220
* 1816 * 3055 2250
* 1915 * 3225 2520
* 2050 * 3265 2645
* 2160 * 3615 3040
* 2360 * 4005 3220
* 2860 * 4340 3745
* 3020 * 4565 3895
ယခင်: မီးဖိုထဲကပြောင်းလဲမှုကို switch ကို
နောက်တစ်ခု: Pneumatic အရည်ကျိုမီးဖိုအဆောက်အအုံစက်
မီးဖိုထဲကပြောင်းလဲမှုကို switch ကို
နေရပ်လိပ်စာ: Guting လမ်း၏အနောက်, Weicheng ခရိုင်, Weifang အားရှန်ဒေါင်း, တရုတ်
1.5 Ton MF induction အရည်ကျိုမီးဖိုနှစ်စုံ ...
ရုရှားနိုင်ငံ Clients တွေအနေနဲ့ 10 Ton အလတ်စားဘောင် Visited ...